သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်-> ထုတ်ကုန်များ
GLADAID ENTERPRISE CO.,LTD အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပို့ကုန်ဖြစ်ပြီး, ပေးသွင်း Key ကိုမိတ္တူပွား, စက်ရုံအတွက် Taiwan. ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Taiwan-ကျယ်ပြန်အကွာအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကြောင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းမီထုတ်ကုန်များ-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းကိုသင်တို့အားပေးအာမခံထားသောအလွန်ပါရမီရှင်ပညာအခွက်တဆယ်ရေကန်ရှိသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုမော်ဒယ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
HSS တပ်ဆင်ထားတိုက်တေနီယမ်ဓါးနှင့် Tungsten သံမဏိလွှဓါးချထားတဲ့.
ညှိစောင်းဝင်ရိုးခွင့်ပါမစ်နှင့်အတူသီးသန့် system ကို0င်လက်ယာရစ် & တန်ပြန်လက်ယာရစ် 45 အကြားမည်သည့်ထောင့်မှတဖြည်းဖြည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်း slanted ခံရဖို့ Clamp ။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှု angular ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူသော့မြား၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံတူအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
အထူးဒီဇိုင်း tracer နွေဦးထို့နောက်မည်သည့်လွဲချော်-ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အသုံးပြုသူကိုကူညီဒါခုတ် tracer နွေဦးပေါက်အိမ်ခြံမြေဦးစွာအပေါက်မှာရည်ရွယ်ထားရန်ရှိသည်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မြွေ / ပရိုဖိုင်းကိုဖြတ် key ကိုလုပ်နေစဉ်, အသုံးပြုသူသင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းအတိမ်အနက်ကို fix မှနှစ်ဦးစလုံးဒေါင်လိုက် action ကိုလီဗာ & tracer နွေဦးအစု lock နိုင်ပါတယ်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပန်းကန်အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုဖုဖြတ် & မြွေ / ပရိုဖိုင်းကိုဖြတ်တောက် slotting များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုအထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သော့ခတ်, အလိုအလျှောက်ဖြတ်ဧရိယာ၏အစွန်းဆန့်ကျင်အမှီဖို့နွေဦးပေါက်အိမ်ခြံမြေရှိရပါလိမ့်မယ်။
အဖုညှိအမြန်နှုန်း, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာရှုးရဲ့ RPM ညှိနိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားသောတိကျသော, အဆကိုကယ်တင် & မြင့်မားထိရောက်မှု။
ရှုထောင်: 300 မီလီမီတာ (W) * 350mm (ဃ) * 520mm (H)
ဘ 24 ကီလို
GW 26 ကီလို
Meas ။4CUFT
မော်တော်: လူပျိုအဆင့် 2P, 90W, Rpm10000
110V သို့မဟုတ် 220V, 50HZ သို့မဟုတ် 60HZ
ညှိ tilt င်ရိုးနှင့်အတူ AN သီးသန့် system ကို angular ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူသော့မြား၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံတူခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါညှပ်လက်ယာရစ် & တန်ပြန်လက်ယာရစ်° 45 စေရန်°0င်တို့အကြားမည်သည့်ထောင့်မှတဖြည်းဖြည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်း slanted နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ GL-750 key ကိုစက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သော့ပြင်လုပ်ငန်းများအတွက်လိုင်းဆလင်ဒါ key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အပေါ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစံမော်တော်ဆိုင်ကယ် / ကားဆလင်ဒါ keys တွေကိုနှင့် cruciform keys တွေကိုအပါအဝင်အများဆုံးဆလင်ဒါ keys ကိုဖြတ်မည်။ ဒီမော်ဒယ်တုနှိုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏။
အဆိုပါ 4-လမ်းမေးရိုး 120mm key ကိုနှစ်ချက်ဘက် grooved key ကိုမဆိုအမျိုးအစားမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကျင်းပရန်သင်တို့အလိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်
ထိုရထားပြုစုပျိုးထောင်သို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းဖြင့် activated အပေါ်-off Micro-switch ကိုထိန်းချုပ်ထားအလိုအလျောက်အာဏာ။
စက်ဒီဇိုင်းအတွင်း၌ဆီမီးခွက်ကိုတိုက်ရိုက်ရထားနှင့် vise မေးရိုး၏မျက်နှာပြင်အလင်းပေးနိုင်သည်။
V ကို type ကိုထောင့်ရှုးတပ်ဆင်ထား။
သော့များ duplicating စဉ်ပျက်စီးခံရဖို့မရှုးနှင့်မေးရိုးကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရသောလမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်အပိုက​​ိုပြုပြင်တာတွေဝက်အူ။
ရှုထောင်: 330 မီလီမီတာ (W) * 370mm (ဃ) * 290mm (H)
မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 1/5 HP, RPM 1720
အဆိုပါမိတ္တူပွားထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များဘေးကင်းလုံခြုံသိုက်နှင့်အံဆွဲသော့ခလောက်နှင့်အတူအသုံးပြုသူတို့အားအဖြစ် "flat" သော့မြား, duplicating များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အဖြိုက်နက် carbide ပစ္စည်းလွှ slotting တပ်ဆင်ထား။
မည်သည့်အရှည်၏ပြားချပ်ချပ်သော့ bitted လီဗာ & ဘက်ခြမ်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သော့ "ကို arc" ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နယူးဒီဇိုင်း vise မေးရိုး duplicating များအတွက်အလွယ်တကူခလုတ်လှည်။
ရှုထောင်: 300 မီလီမီတာ (W) * 300mm (ဃ) * 320mm (H)
ဘ: 14 ကီလို GW: 16 ကီလို
လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး-စမတ်ထိန်းချုပ်မှုလျှော,အထူးမြွေများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် grooved သော့.
တစ်လေးလုံးတပ်ဆင်ထား-လွယ်ကူစွာများအတွက်ဇယားကွက်ကြိတ်ခုတ်ခြင်းနှင့် tracers ကရိယာ
ညှပ်၏ညှိလှည့်ဒီဇိုင်းကိုလှည့်ပတ် SB သော့နဲ့တူချိုနှင့်အတူလှည့်လည်သော့ဖြတ်ဖို့သုံးနိုငျ.
multi-အလုပ်လုပ်တဲ့ key ကိုညှပ်ဘုံပြားချို key ကိုသုံးနိုင်တယ်&မွှေ/KABA တူသောသော့ဖြတ်တောက်ပရိုဖိုင်းကို,KESO&-Benz.
အသစ်တီထွင်လေး-လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုလှည့်နှင့်အဓိက slotting ဘက်
280 မီလီမီတာ(W က)*385mm(: D)*415mm(H ကို)
N ကို.W က.18 ကီလို
, G.W က.20 ကီလို
အကောင်းဆုံး Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အဆိုပါ 4way vises ဆိုကို double-တဖက်သတ် grooved keys ကိုရညျညှနျးနိုင်ပြီး, groove vise ၏ညာဘက်အနေအထားအပေါ် shouldered keys တွေကိုနေရာချဖို့အဓိကသော့ချက် gauge ကိုသုံးနိုင်သည်။
2 လမ်း vise 128mm key ကိုနှစ်ချက်ဘက် grooved key ကိုမဆိုအမျိုးအစားမှီတိုင်အောင်ကျင်းပရန်သင်တို့အလိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
အ vise ၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအပိုင်း 128mm keys တွေကိုနှင့်အပို adapter လိုအပ်ကြောင်းအထူး / ပုံမှန်မဟုတ်သော keys ကိုပွား။
မြွေ / ပရိုဖိုင်းကိုဖြတ် key ကိုလုပ်နေစဉ်, suer သင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းအတိမ်အနက်ကို fix မှနှစ်ဦးစလုံးဒေါင်လိုက် action ကိုလီဗာ & tracer နွေဦးအစု lock နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလက်ဝါးကားတိုင်ကိုပန်းကန်အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုဖုဖြတ် & မြွေ / ပရိုဖိုင်းကိုဖြတ်တောက် slotting များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုအထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သော့ခတ်ရန်, အလိုအလျှောက်ဖြတ်ဧရိယာ၏အစွန်းဆန့်ကျင်အမှီဖို့နွေဦးပေါက်အိမ်ခြံမြေရှိရပါလိမ့်မယ်။
မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 2P, 90W
Key ကိုစက် Cutter
multi-functional key ကိုညှပ် KABA, KESO &-Benz တူ keys တွေကိုဖြတ်တောက်ဘုံပြားချိုသော့ချက် & မြွေ / ပရိုဖိုင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နယူး type ကိုမိုက်ခရိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်စကေးအညှိအလုပ်ကပိုတိကျကူညီပေးနိုင်သည်။
ရေပြင်ညီအရေးယူလီဗာဘောလုံးကိုချောချောမွေ့မွေ့ & အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့သည်းခံခြင်းသောအရာတို့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပန်းကန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားသောလုံခြုံရေး Key ကိုစက်
GL-035 စက်အရှည်အတွက်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ keys ကိုမဆိုမျိုးကိုပွားနိုင်ပါတယ်။
သံမဏိ / ကြေးဝါကို ... ETC ရှောင်ရှားရန်ပလတ်စတစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဖုံး။ (ထွက်ဝင်လို့မှမြေမှုန့်) ။
ကို C / W ကိုအဖြိုက်နက် carbide ရှုး။
4-နည်းလမ်းများမေးရိုး (ကနှစ်ဆတဖက်သတ် keys တွေကိုအပါအဝင်ကွက်လပ် keys ကို၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုး Clamp နိုင်ပါတယ်) ။
ရှုထောင်: 265 မီလီမီတာ (W) * 275mm (ဃ) * 335mm (H)
ဘ 16 ကီလို
GW 18 ကီလို
မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 90W, Rpm3450
110V သို့မဟုတ် 220V, 1.7A
Right-သို့မဟုတ်လက်ဝဲ-အလှည့် keys ကိုဖြစ်စေဘို့အကွံ၏ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်နှင့်အတူဒီနည်းကိုထုံးစံလုပ်, စွယ်စုံ code ကိုစက်ဖြတ်တောက်မှု keys ကို။ စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သော, ကတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ကုဒ်လေး keys တွေကိုတခုနဲ့ထပ်နေတယ်။
ရှုထောင်: 56cm (W) * 83cm (ဃ) * 113cm (H)
ဘ 170 ကီလို
GW 220 ကီလို
Meas ။ 19 CFT
မော်တော်: 3Phase, 1 HP, RPM 1725
အထူးဒီဇိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ထားသော key ကိုချမှတ်ခြင်းစက်သာ vise ပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့် Semi-မြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်စတုရန်း key ကိုလုပ်လိမ့်မည်။
သူတို့၏လိုအပ်ချက်ကိုအပျေါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သံသရာအရေအတွက်ထူထောင်ရန်ကွန်ပျူတာ & မစ်အသုံးပြုသူ automatic code ကိုရှေးခယျြ။
လွယ်ကူသော Operating, ရိုးရှင်းသောပုံစံလက်စွဲစက်။
နှစ်ဆတဖက်သတ် keys တွေကိုအပါအဝင်သော့ချက်အလွတ်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုး Clamp နိုငျသော4လမ်းမေးရိုး။
High Speed​​ သံမဏိတစ်ခုတည်းထောင့်ရှုးတပ်ဆင်ထား။
တိကျသောအမြင့်, အဆကိုကယ်တင် & ထိရောက်မှုခြီးမွှောကျ။
ရှုထောင်: 300 မီလီမီတာ (W) * 215mm (ဃ) * 320mm (H)
ဘ 14 ကီလို
GW 16 ကီလို
မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 1/4 HP, RPM 1720
ဒီစက်ကို 12V ကား charger ကိုလျှပ်စစ်မီးနှင့်တကွ, အလုပ်ထုတ်တင်ဆောင်လာသောအဘို့ဖြစ်၏။
ဒါဟာမျှအပိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလိုအပ်ပါသည်စတာတွေကို double ဘက် groove သော့, ကားသော့, ဆိုင်ကယ်သော့မြား, မဆိုအမျိုးအစားအပါအဝင် keys ကို, အပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ 4-နည်းလမ်းများ vise 128mm key ကိုမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကျင်းပရန်သင်တို့အလိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
နိုင်လွန် Brush တပ်ဆင်ထား။
ဘ: 8 ကီလို GW:9ကီလို
ဒီနည်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိသော့ချက် code ကိုစက်သော့စက်ရုံထုတ်လုပ်ရေးအတွက်သင့်လျော်သည်။
အဆိုပါစနစ်, အချိန်နှုန်းဖောက်သည်-အထူးပြုလေး keys တွေကိုAbloy®, Abus®နှင့်အတူလျောက်ပတ်သည်။
ဒါဟာအဖြိုက်နက်ခုတ်4PCs အားဖြင့်ညာဘက်သို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်လှည့်ဖြစ်စေသော့မြားအဘို့အဖြတ်တောက်ကွဲပြားခြားနားသောအတိမ်းစောင်းထောင့်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
အရေးပေါ်ရပ်တန့် switch ကိုအတူ။
ဖောက်သည်များအလိုအရ '' က Semi-မြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်စတုရန်း keys တွေကိုရှိမရှိကဒီစက်ကိုထုတ်လုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ညှပ်၏ညှိလှည့်ဒီဇိုင်းကိုပတ်ပတ်လည် SB keys ကိုတူချိုနှင့်အတူလှည့်လည် keys တွေကိုခုတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးဇယားကွက်၏အသီးအသီးကိုလှည့်ဖို့အသစ်အတိမ်အနက်ကို tuning ဖုကအနေအထားတွင်ရှိနိုင်ပါသည်, 0.02mm ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရေပြင်ညီအရေးယူလီဗာဘောလုံးကိုချောချောမွေ့မွေ့ & အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့သည်းခံခြင်းသောအရာတို့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပန်းကန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
tracer နွေဦးပေါက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆိုပါစက်ကိုအထူးထို့နောက်ဒါကြောင့်မည်သည့်လွဲချော်-ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အသုံးပြုသူကိုကူညီခုတ် tracer နွေဦးပေါက်အိမ်ခြံမြေဦးစွာအပေါက်မှာရည်ရွယ်ထားရန်ရှိသည်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာမြင့်မားတိကျသော, အဆကိုကယ်တင် & မြင့်မားထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
angle Lock ကိုညှပ်အမျိုးမျိုးသောမမှန်-shaped keys တွေကိုအပေါ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ OEM, Right-သို့မဟုတ်လက်ဝဲ-အလှည့် keys ကိုဖြစ်စေဘို့အကွံ၏ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်နှင့်အတူဖောက်သည်လုပ်, စွယ်စုံ code ကိုစက်ဖြတ်တောက်မှု keys ကိုပါပဲ။
ရှုထောင်: 285 မီလီမီတာ (W) * 255mm (ဃ) * 240mm (H)
Meas ။ 2.48 CFT
မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 1/5 HP, RPM 1675